ကဲ အတန်ဆုံး၊ အလန်းဆုံးနဲ့ အဟော့ဆုံးဆိုမှတော့ ဘယ်လက်လွှတ်ခံတော့မလဲ … – Myanma Daily
ကဲ အတန်ဆုံး၊ အလန်းဆုံးနဲ့ အဟော့ဆုံးဆိုမှတော့ ဘယ်လက်လွှတ်ခံတော့မလဲ …
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ ဘယ်သွားသွား ဘယ်လာလာ မရှိမဖြစ် အမြဲတမ်း ယူဆောင်ရတဲ့ အရာတွေထဲက တစ်ခုကတော့ဖုန်းပါပဲ။ ယခုလိုတိုးတက်မြန်ဆန်နေတဲ့ ခေတ်ကြီးထဲမှာ အရာရာကို သိရှိနိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဖုန်းဟာဆိုရင်ဖြင့် ကျွန်မတို့ရဲ့ မရှိမဖြစ် အရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။
ယနေ့ခေတ်တွင် တွင်ကျယ်လာသည်နှင့်အမျှ ကျွန်မတို့ရဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းတွေဖြင့်သာ အင်တာနက်ကို တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုလာကြပီလေ။ အဲ့ဒီလို အင်တာနက်ကနေပဲ မိဘဆွေမျိုးတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ချစ်သူတွေအတွက် အဆက်အသွယ်တစ်ခုကြီးဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့။ Video call တွေ ပြောကြမယ် message တွေ ပို့ကြမယ်။ သတင်းအကြောင်းအရာတွေ သီချင်းတွေ ဟာသတွေနဲ့ ရသမျိုးစုံအစရှိသဖြင့် အရာရာကို ဖုန်းတစ်လုံးရှိရုံနဲ့ သိရှိနိုင်ပီလေ။ အဲ့လိုမျိုးစုံသော အရာတွေကို ပြုလုပ်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ ဖုန်းဘေလ်တွေ တစ်လတစ်လတော့ မနည်းဘူး ကုန်ကျတာပေါ့။ ပိုက်ဆံတွေသာ ကုန်ပေမယ့်လည်း ကျွန်မတို့ကတော့ ဒီနည်းပညာ ခေတ်ထဲကနေတော့ ရုန်းမထွက်နိုင်သေးပါဘူး။
ဟော!!!! အခုပဲ အင်တာနက်ကနေ သတင်းတစ်ခုဖတ်ရပြန်ပီ။
ကျွန်မအတွက်တင်မက အားလုံး အားလုံး အတွက် သတင်းကောင်းပါပဲ!!!!
Ooredoo ကနေပီးတော့ အင်တာနက်သုံးရင်းနဲ့ ဖုန်းဘေလ်တွေကို 100% လက်ဆောင်ရရှိမယ့်အဟော့ဆုံးဒေတာအစီအစဉ်ကြီးဆိုပဲ။ Wow ….. အရမ်းကို မိုက်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုပဲ။
ကဲ အရမ်းကို စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့ အကြောင်းအရာဆိုတော့ အစကနေ အဆုံး ဖတ်ရမယ်လေ။
ဒေတာအစီအစဉ်တွေများစွာထဲက ကိုယ်တိုင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဒေတာတစ်ခုကိုဝယ်ယူတိုင်း ၀ယ်တဲ့ဒေတာပမာဏနဲ့ ညီမျှတဲ့ ဖုန်းဘေလ်တွေကို ပိုင်ဆိုင်ရမှာတဲ့။ Woo ….. အမေးဇင်း ….
ဒေတာအစီအစဉ်ရဲ့ သက်တမ်းကလည်း ရက် (၃၀) တဲ့။ ဟင် ဒါဆို ရက်(၃၀)တွင်း ဒေတာမကုန်ရင်တော့ဖြင့် ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲ?????
ဒါ့အတွက်တော့ မပူနဲ့နော်….. လက်ကျန်ဒေတာတွေရှိနေသေးရင်လည်း အစီအစဉ်အသစ်ကို ထပ်မံဝယ်ယူခြင်းဖြင့် နောက်ထပ် ရက် (၃၀) သက်တမ်းထပ်တိုးနိုင်ပီပေါ့။
ကဲ အခုပဲ ဒေတာအစီအစဉ်သစ်ကို ၀ယ်ယူနိုင်ဖို့ *140# ကို ခေါ်ဆိုလိုက်ပီ။ (2900 MB ကို 4999 ကျပ်ဖြင့် ၀ယ်ယူလိုက်ပီ။ ဟော … ဖုန်းဘေလ်ကလည်း 5000 ကျပ်ကို လက်ဆောင်ထည့်ပေးလိုက်ပီဆိုတော့ ကျွန်မအတွက်တော့ အရမ်းကို ကောင်းမွန်တဲ့ အစီအစဉ်တစ်ခုပဲ။)
ရရှိတဲ့ ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်နဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကို အင်တာနက်ကပဲ ဆက်သွယ်ပီး ပြောပြပေးရမယ်။
ဖုန်းဘေလ်လက်ဆောင်ကလည်း သုံးသလောက်သာကျသင့်မယ့် အင်တာနက်အတွက် (၇) ရက်အတွင်း အသုံးပြုနိုင်ပီတဲ့။
ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ ဒေတာအစီအစဉ်အသစ်ကို မြန်မြန်ဝယ်ယူရင်း အင်တာနက်နဲ့ ကိုယ်ရဲ့ အသုံးပြုလိုသည်များ အမြန်ဆုံး အသုံးပြုလုပ်ကြရအောင်။
လူတိုင်းအတွက် 100% ဖုန်းဘေလ်တွေကို လက်ဆောင်ရယူဖို့ Ooredoo ရဲ့ အဟော့ဆုံးဒေတာ အစီအစဉ်ကို လက်မနှေးပဲ အမြန်ဆုံး ၀ယ်ယူဖို့ *140# ကို ခေါ်ဆိုလိုက်ကြပါစို့လား…….